लकडाउन द्विविधा : सरकार भन्छ – उत्पादन बढाउने, किसान भन्छन् – बिउ कहाँबाट ल्याउने ?
कोरोना भाइरस संक्रमणको विश्वव्यापी महामारी बढिरहेका बेला श्रम बजार संकटमा परेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वदेशमै रोजगारी दिने दाबी विभिन्न अन्तर्वार्तामा गरिरहेका छन् ।
तर स्वदेशमा खेतीपाती गरिरहेका किसान समस्यामा परेका छन्, बिउबिजन र मलखाद नपाएर ।
कोरोना भाइरस फैलिनबाट बच्न लकडाउन भएको २८ दिनसम्म अत्यावश्यकबाहेक पसल, बजार व्यवसाय खुलेका छैनन् । सरकारले बिउबीजल र मलखाद पसललाई अत्यावश्यक सेवामा समावेश गरेको छैन । जसले गर्दा किसानले खेतीपाती प्रभावित भएको छ ।
यतिबेला तरकारी खेतीमा टमाटर, काउली, बन्दा लगाउने सिजन भएपनि बिउबिजन पाउन नसकेको गुनासो किसानले गरेका छन् । ‘बर्खे तरकारी लगाउन बिउ नपाएका समस्या भइसक्यो,’ सुर्खेतको चिंगाड गाउँपालिकाका कृषक प्रेमबहादुर खत्रीले भने, ‘अहिले न त मल पाइन्छ, न त बिउ नै खरिद गर्न पाइन्छ । बिउ नै नपाउँदा हामीले कसरी उत्पादन गर्ने ? समस्या भएको छ ।’
लकडाउनका कारण अर्थतन्त्रमा पर्नसक्ने प्रभावलाई कम गर्न सरकारले कृषि उत्पादन बढाउने चर्चा समेत गरिरहेको छ तर किसानले बिउ र मल पाइरहेका छैनन् । सरकारी कुरा र किसानको अवस्थामा द्विविधा देखिएको छ ।
समयमै तरकारीको बेर्ना राख्दा नपाउँदा तरकार उत्पादन प्रभावित हुनसक्ने जुम्लाका कृषक रमेश देवकोटाले बताए । ‘अहिले हिमाली जिल्लामा हिउँ पग्लने क्रम जारी छ । जग्गा खाली भइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘तरकारी तथा अन्य अन्नबालीको बिउ छर्ने काम शुरू हुने बेलामा लकडाउनले किसानलाई आहत भएको छ ।’
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१० कि माया शर्माले बिउ नपाएका कारण जग्गा खाली नै राख्नुपर्ने अवस्था आउँदा पीर लागिरहेको बताइन् । ‘खेतमा लगाएको गहुँ काटिसकें । अब तरकारी खेती गर्नका लागि जमिन तयार पारेर राखेकी छु,’ उनले भनिन्, ‘मकै तथा तरकारी बाली लगाउनको लागि मैले जमिन तयार गरेको धेरै समय भइसकेको छ । अबको १० दिनमा बिउ पाउन नसकेको खण्डमा तरकारी बाली र मकै लगाउन सकिँदैन । ढिला भएर लगाएपनि भनेजस्तो उत्पादन हुँदैन ।’
लकडाउनका बेला किसानलाई चाहिने स्रोतसाधन उपलब्ध गराउने र विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा सरकारले ध्यान नदिएको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नेता मोहन बडुवालले बताए । ‘खेतीपातीलाई अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत राखेर हुन्छ वा अन्य कुनै विकल्प दिएर हुन्छ, किसानका लागि घरमै मलबिउ पुर्‍याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । यदि समयमै किसानलाई बिउ दिन सकिएन भने यसले उत्पादनमा ठूलो क्षति हुनेछ,’ उनले भने ।
वीरेन्द्रनगरको समृद्धि एग्रोभेटका सञ्चालक याम शर्माले खेतीपाती लगाउने समयमा कम्तिमा एग्रोभेटहरू १–२ घण्टा सञ्चालन गर्न अनुमति दिनुपर्ने बताए । ‘हामीले व्यापारभन्दा पनि उत्पादन बढाउने सोचका साथ पसल खोल्न दिनुपर्ने सोच बनाएका हौं । हाम्रा लागि मात्रै नभएर कर्णालीको उत्पादन बढाउनका लागि कृषकले मलबिउ पाउनु आवश्यक छ । अझै केही बिग्रेको छैन, सरकारले जग्गा बाँझो नहोस् भन्नेतिर तत्काल ध्यान दिन जरुरी छ,’ उनले भने ।
सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका कृषि शाखा प्रमुख श्रीप्रसाद जैसीले खेतीपातीको समयमा किसानलाई बिउ उपलब्ध गराउनैपर्ने, अन्यथा मकै र तरकारी उत्पादनमा धेरै कमी आउने बताए । ‘अहिले हामी कार्यालय जान पाएका छैनौं । निजी क्षेत्र पनि बन्द छ, जुन कुरा कृषकसँग सम्बन्धित रहेको छ,’ उनले भने, ‘यस अवस्थामा किसान पनि घरबाहिर निस्केर सामग्री खरिद गर्न सकिरहेका छैनन् । सरकारले समयमै सोच्नु आवश्यक छ ।’
कृषि उत्पादन बढाउन बिउबिजन आयात र कृषि पसल सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने उनले बताए । ‘उन्नत जातको बिउ ल्याउन बाहिर नै जानुपर्ने अवस्था छ । यसलाई सहज बनाएको खण्डमा बर्खेबालीमा समस्या नआउला । लकडाउन लम्बिँदै गएको खण्डमा खेतीबालीको सिजनलाई समेत ढिलासुस्तीले समस्या पार्ने मैले देखेको छु,’ उनले भने ।
प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले किसानले बिउ नपाएका कारण जग्गा बाँझो राखेको भनेर गुनासो गर्ने अवस्था आउन नदिने बताइन् । ‘हामीसँग २ वटा गाडी छन् । ती दुवै गाडीको माध्यमबाट मन्त्रालयले सक्ने वा अन्यसँग सहकार्य गरेर भएपनि हरेक स्थानीय तहसम्म बिउ पुर्‍याउने काम गर्छौं । अहिले कर्णालीमा कति बिउ छ भन्ने तथ्यांक संकलनको काम अन्तिम चरणमा भइरहेको छ । कति आवश्यक पर्छ र बाहिरबाट कति कुन जातको बिउ ल्याउनुपर्ने हो त्योबारे अध्ययन भइरहेको छ,’ मन्त्री केसीले भनिन् ।